Ifilimu iBlack Panther idlale indima enkulu ekunqobeni kwePirates - Umqeqeshi | News24
Ifilimu iBlack Panther idlale indima enkulu ekunqobeni kwePirates - Umqeqeshi
Cape Town - Umqeqeshi we-Orlando Pirates uMilutin 'Micho' Sredojevic udalule ukuthi ukuyobuka ifilimu phakathi nesonto kubasize kakhulu abafana bakhe ekutheni banqobe kowomkhaya baseSoweto ngoMgqibelo, beshaya iKaizer Chiefs ngo-3-1.
AmaSea Robbers anqobe lo mdlalo ngo-3-1 kepha ukube abewasebenzisa wonke amathuba awathole ngesiwombe sesibili ngabe kukhulunywa okunye.
"NgoLwesibili ebusuku sihambe njengekilabhu sayobuka ifilimu iBlack Panther," kusho uSredojevic.
"Yifilimu enomlando omuhle nge-Afrika enikeze abadlali bami ugqozi lokudlala ngezikhwepha. Bekuyiphupho lethu ukuvala iviki ngegiya eliphezulu," kusho lo mqeqeshi.
OLUNYE UDABA: Izinguquko zikaKomphela ziyibulele iChiefs - Dladla
Lokhu kunqoba kusho ukuthi iPirates, ehlezi endaweni yesibili kwilogi, ilandela iMamelodi Sundowns eqhwakele esicongweni ngamaphuzu amane.
"Ithimba labaqeqeshi kanye nabadlali basebenze kanzima iviki lonke belungiselela ukuthi sinqobe lo mdlalo," esho.
"Siyaziqhenya kakhulu ngokufaka amagoli amathathu sidlala neqembu elibalwa namanye ahamba phambili ngokuba nodonga oluqinile kwiligi."
USredojevic uthi ufuna ezakhe ziqhubeke la ezigcine khona uma seziqhubeka nomgqigqo.
"Kumele siqhubeke nokunyusa amasokisi ukuqinisekisa ukuthi izinduku azibuyeli ngakithina uma sesidlala neCape Town City noma iGolden Arrows," kuphetha uSredojevic.